ကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆိုလမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသလား - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကျန်းမာသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသလား။ အဲဒီမှာရှိမယ်, ငါတို့ကသူတို့ကိုမတွေ့ပါ။ ယောက်ျားအများစုသည် reboot ပြုလုပ်စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ပြီးနောက် ကို restart (လိုအပ်ပါက) ကျွန်ုပ်တို့သည် visitors ည့်သည်များအားစိတ်ပျက်စရာများနှင့်ပေါက်ကွဲစေနိုင်မည့်အချိန်ဇယားကိုရေးဆွဲရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ (“ ကြည့်ပါ -ငါဘယ်လိုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate သလဲ?")
တချို့ကအချိန်ဇယားသူတို့တစ်တွေနိမ့်ဆုံးမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစောင့်ရှောက်လျှင် (ဆိုလိုသည်မှာ, ပျင်းသည့်အခါ masturbating မဟုတ်, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအိပ်ပျော်ကျသွားရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်ပိုလျှံလိင်စိတ်တွေနဲ့စိမ်းဖြင့်သာအခါ) ပိုကောင်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပြောဆိုချက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ masturbate ပြောကြပါတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြီးသားပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေခံစားခဲ့ကြရသည်သောသူတို့အဘို့အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ မြင် Reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ porn ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း-အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာကိုလျော့နည်းအန္တရာယ်များသည်။
ဝိရောဓိအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုလွန်ကဲစွာအသုံးချခြင်းသည်“ နည်းနိုင်သမျှနည်းသည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မကြာခဏအထွတ်အထိပ်လုပ်နိုင်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုပိုမိုဆိုးရွားစေ နောက်ရက်များ၌လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအားနည်းခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်လည်းရှိနေနိုင်သည်။ လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု.
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အစစ်အမှန်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အမှန်တကယ်ချစ်ခင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုများအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများကို အခြေခံ၍ အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ် Flashbacks များအထွthan်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခြင်းထက်ပြproblemနာနည်းကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် ပို၍ နည်းသောပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အော်ဂဇင်အလွန်အာရုံကြောဓာတုလွန်ကဲမှုသံသရာကိုစတင်သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ရက်များအတွင်းအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်မပြင်းထန်ပါ။
တစ်ဦးက reboot တကယ်လုပ်နိုင် လြော့ပေါ့စေ : တွေ့ရှိခဲ့ဒီကောင်လေးအဖြစ်, masturbate ရန်သင့်လိုအပ်ချက်
၁၀ ပတ်လောက်ကြာတော့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။ ပထမစုံတွဲကဖြတ်သွားရမယ့်ခွေးတစ်ကောင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (နှင့်ညစ်ညမ်းခြင်း) ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြသည်။ ပြင်းထန်သောစိတ်အပြောင်းအလဲများသည် ဦး ခေါင်း၌မညီမညာဖြစ်နေသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အခုတော့ ED ဟာပြaနာတော့ဘူး။ ငါ porn မလိုအပ်ဘဲတောင်မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်။ ဒီအချက်ကိုရောက်တော့ဒေါသကြီးစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်သူလိုလိင်ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုယန္တရားကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိတော့သည့်အခါအစာနှင့်အမျှအစာမစားနိုင်တော့ပါ။
PMO မပါဘဲ Going 1) ကျိန်းသေငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ရှက်ကြောက်စိတ်, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်လက်တွေ့စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အတူရောထွေးခြင်းကိုခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
2) ယုံကြည်မှုမသက်ဆိုင်အကျိုးဆက်များ၏ MO ကိုရန်၎င်း၏ OK ကိုစဉ်းစားငါ့စိတ်ကိုမြူဆွယ်, တည်ဆောက်။ အကြှနျုပျ၏အသစ်ရှာတွေ့ယုံကြည်မှုထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်ပြန်ပိုဆိုးလာမယ့်အဖြစ်အကျိုးဆက်များမဆိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။
၃) MO ကိုတကယ်ပဲပိုလို့တောင်ခံစားရတယ်၊ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်နာရီတွေသာမကရက်တွေတောင်မှာပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု? မသိဘူး
၄။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊Chaser Effectဒီနေရာမှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်မဖော်ခင်ဒီလောက်ကြာအောင်ကိုင်ထားနိုင်တယ်။
မင်းရဲ့အခြေအနေကိုမင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ငါကဲ့သို့သင် fapping အကြောင်းကိုအကြောင်းကိုအဖြစ်အလေးအနက်ခဲ့ပါတယ်တူသောကြောင့်အသံ ငါတော်တော်လေးညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့တစ်ခါတလေအရက်မူးနေတဲ့နေ့တစ်နေ့လောက်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရာထူးကိုရေးသားစဉ်ကကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်တကယ်ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်သူမှမပြောရဲကြဘူး။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုအကျင့်ဟောင်းတွေပြန်ကျင့်တဲ့တစ်လလောက်ကြာတော့ငါ့ကိုအောက်ဘက်သို့လှည့်လိုက်တယ်။ ငါချက်ချင်းလူမှုရေး, ယုံကြည်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တကယ်ပိုပြီးမပျော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင်သည်သင်၏ဟောင်းနွမ်းသောအကျင့်ဟောင်းသို့ပြန်ချော်ပါလိမ့်မယ်။ fap တစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်၊ ငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဒီတစ်ခုနဲ့သင့်ကိုအရှုံးပေးဖို့ခွင့်ပြုပြီးပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရေးအခင်းတွေကိုသင်အရှုံးပေးလိမ့်မယ်။ ဒါက chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအရာအစစ်အမှန်သည်နှင့်ဤစွဲအလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမိုက်မဲသော fap ကတည်းက7ကျော် Streak ရသေးရှိသည်နှင့်ကတော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားရွားငါ့အသက်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ညီအစ်ကိုကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါ။ သင်နောင်တမရပါ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၅) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ငါ porn မှ "အလျင်အမြန်" Meth ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခါငါခံစားရခံစားချက်ဆင်တူသည်။ dopamine အလွန်ထိတွေ့မှုကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်အားအားနည်းလာသည်။ ယုံကြည်မှုနိမ့်သည်။
၆) ငါကျောက်အောက်ခြေကိုထိသည်အထိစက်ဘီး ဆက်၍ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ် - ဒီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်သည်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပုံရသော်လည်းအော်ဂဇင်သည်ညစ်ညမ်းမှုကို ဦး တည်သည်။ ငါမရှိဘဲတ ဦး တည်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မဟုတ်သေးဘူး။
တစ်နေ့ ၃ ရက်ညနေခင်းမှာငါအရမ်းပင်ပန်းနေပြီ။ ဒီဆေးလုံးကိုကျွန်တော့်ဇနီးမသိဘဲသိမ်းဆည်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေတာ။ ကောင်းပြီကတော့ရယ်စရာတစ်ခုကတော့ငါမယူခဲ့တာပဲ။ ဒါကြောင့်ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုအနည်းငယ်စိတ်မ ၀ င်စားပေမဲ့အရာအားလုံးကကောင်းပါတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ကသံသယဖြစ်ပေမယ့်လည်းသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအနားယူလိုက်တာနဲ့ libido ဟာဘယ်နေရာကမှပေါ်ထွက်လာပုံမရဘူး။ ငါအလေးအနက်ထားငါယောက်ျားတွေ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါဝင်သည်) တွေအများကြီးကြောင်းစမ်းသပ်မှုရှာဖွေနေ, ငါသာအစစ်အမှန်အရာသာစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ထင်သောကြောင့်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထိုညတွင်ကစားနိုင်ခြင်းရှိမရှိအလောင်းအစားပြုလုပ်လိုပါက 'no' လောင်းနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်နှင့်သင် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင်, သင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းကောင်လေး said:
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်တွင်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင့်အားလိင်ဆက်ဆံခြင်း၌ကြာရှည်ခံရန်ကူညီနိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်“ တစ်ကိုယ်တော်စိုက်ပျိုးခြင်း” ကိုကျင့်သုံးလျှင်၊ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားအများစုသည်ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင် ED နှင့် porn မှအခြားပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားလမ်းတစ်လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနေရပုံရသည်။ အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမရပ်တာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနောက်ကွယ်မှဇီဝဗေဒ / မျိုးရိုးဗီဇအင်အားသည်သင့်ကိုအခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှမ fertilization တောင်မှဖော်ရွေသောအဆက်အသွယ်မှကျေနပ်မှုကိုမှတ်ပုံတင်သည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်သုံးစွဲသူများသည်လူမှုရေးပေါင်းသင်းခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကိုပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကိုအံ့အားသင့်စေလေ့ရှိသည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသက်သာစေသည့်တစ်ခုတည်းသောသွယ်ဝိုက်သောလွှမ်းမိုးမှုမဟုတ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ အစားအစာပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ သည်အခြား tools တွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်တွန်းဟန်ချက်ညီစေသောအထောက်အကူအဖြစ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြိမ်နှုန်းကိုသီးခြားပြissueနာအဖြစ်တွက်ထုတ်ရန်ကြိုးစားရုံသာမကစိတ်စွဲလမ်းမှုကိုသက်သာစေပြီးသင်သတိပြုမိသောအရာကိုကြည့်ရှုပါ။ သတိရပါမှားယွင်းတဲ့အဖြေမရှိပါဘူး သင်သည်သင်၏စံပြစွမ်းအင်အဆင့်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အဖြေများသာရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီ "ပုံမှန်" ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိကြောင်းသတိရပါ။ တခါတရံတွင်၎င်းသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပျှမ်းမျှဖြစ်သည်။ အခြားအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်ပုံမှန်နှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်သွေးဖိအားကဲ့သို့သော“ ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်သောကြောင့်လူတို့၏“ ပုံမှန်” အပြုအမူ (ယနေ့အလွန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) သည်အလိုအလျောက်“ ကျန်းမာ” သောအပြုအမူဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ သို့တိုင်၊ ယနေ့“ ပုံမှန်” အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများသည်အမှန်မှာ၊ များစွာသောဦးနှောက် numbing တစ်ဦးအတွက် ထူးခြားသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းနှုန်းပြဇယား။ ကျနော်တို့ကဘာမှမမှားတွေ့မြင်သော်လည်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပေါငျးတို့သလူကြိုက်များမီဒီယာမွှမ်းတင်ကျန်းမာရေး panacea ပတ်လည်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကြည့်ရှုပါ: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်: Quinsey အပေါ် (2012) Comment
တစ်ခုဘေးဖယ်, သိပ္ပံနည်းကျစက္ကူအဖြစ် Hypersexual Disorder: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုချက် Diagnosis hypersexuality ၏အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဖော်ပြထားသည် -“ ဤဆေးခန်းမှဆင်းသက်လာသည့်အချက်အလက်များအရ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားများအတွက် hypersexual ဆန္ဒကို ၇ နှစ်နှင့်အထက် orgasms / တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၆ လဆက်တိုက် TSO အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ”
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်သကဲ့သို့မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝများသည်သူတို့၏ဆန္ဒများကိုအလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပိုပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့သိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အစာမစားတဲ့အစားအစာတွေမှာနေတယ်၊ ​​ဒြပ်ထု၊ hypersexual ရုပ်ပုံတွေနဲ့မပတ်ဘဲကွန်ပျူတာနဲ့တီဗီဖန်သားပြင်တွေကိုတစ်နေကုန်အာရုံစိုက်မယ့်အစားသဘာဝမှာအချိန်ဖြုန်းခဲ့တယ်။ ကြည့်ပါ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော နှင့် လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ။ တစ်ချိန်က“ ပုံမှန်” သည်လိင်ဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုအကြောင်းတစ်ခါမျှမကြားဖူးသူများပင်အတော်အတန်ကွဲပြားခဲ့ကြပေမည်။
ပေါ်အနည်းငယ်ကောင်းသောစာတမ်းများတဦး၏အဆိုအရ လူမျိုးစုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, လေ့လာခဲ့နှစ်ခုအမြိုးအနှယျ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစရာစကားလုံးခဲ့။ မှန်တယ်၊ အာဖရိကန်လူမျိုးစုတွေကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ဘူး (ဒါပေမဲ့သူတို့ကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်) ။ သူတို့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ“ တက်ကြွသောမီးတောင်” ၏ချောက်ကမ်းပါးကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြင့်နေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ရှိသည်။ လက်တွဲဖော်မပါသောယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်အလွန်တရာညစ်ညမ်းသော / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သည် သို့သော်လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် (ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါဘဲ) ပုံမှန်ချစ်ခင်တွယ်တာရမည့်ရည်းစားတစ် ဦး ကိုမတွေ့ပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်“ လိင်စိတ်နိုးထမှု” (မကြာခဏမှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု) ၏ဆိုးကျိုးများကိုဤဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
သင် reboot လုပ်ပါက porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်သတိထားမိတာကိုကြည့်ပါ ဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အကောင့်ရှိတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်များသည်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနက်ရှိုင်းသောပconflictိပက္ခ၌ရှိနေသည်ဟုခံစားနေရသည်။ ဒါဟာငါချိန်းတွေ့နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်စုံတွဲကျော်သုံးပြီးခဲ့စိတ်ကူးယဉ်အဆင့်ကနေဖြစ်ကောင်းခဲ့ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုပြုခဲ့တယ် ဒါဟာသဘာဝအတွက်တော်တော်လေး "ခွဲစိတ်ကုသ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းသို့မဟုတ်ပုံရိပ်ကနေငါ့စိတ်ထားရှိမည်။ ငါစိတ်အေးလက်အေးခံစားရတယ်၊ နောက်မှငါသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ မကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့နောင်တရခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းခံစားမှုမျိုးမခံစားရကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်နက်ရှိုင်းသောအမှိုက်သရိုက်များအပေါ်အရှက်ခွဲခြင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဇီဝကမ္မ / အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပို၍ တူသည်။ ငါတက် primed ခဲ့လိုပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်ညကဤခံစားမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုငါလိုချင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အဲဒီမှာမသွားနိုင်ခဲ့သည်။
မိမိအ 19s အတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီက 30 နှစ်အရွယ်မှအကွံဉာဏျ:
တဦးတည်းလက်တွင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့သဘာဝအရာဖြစ်၏နှင့်သင့်အသက်အရွယ်မှာတကယ့်သင်အများကြီးအပြစ်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Young ကအလောင်းတွေသုတ်ရည်၏အရှုံးကနေအလွန်လျှင်မြန်စွာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်ကဆက်လက်ရည်ရွယ်ပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့သင်ကစိတျထဲတှငျဤအရာတို့ကိုစောင့်ရမည်:
တင်းမာမှုကိုသက်သာစေရုံမျှဖြင့်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကလိင်မှုကိစ္စကိုသန္ဓေတည်အောင်လုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုကြိုးနဲ့တွန်းတယ်။ ငါနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံစတင်ခဲ့သည့်အခါကအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ပြasနာအဖြစ်ထင်ရှား။ , သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်လိုပါကသင်၏အချိန်ကိုယူပြီးခံစားချက်များကိုခံစားပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ အထိအချိန်ပေးပါ။ လိင်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်မှုရစေမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဒါ့အပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သုတ်ရည်မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ထိုအရာနှစ်ခုစလုံးသည်သင့် ဦး နှောက်ထဲတွင်အတူတကွခိုင်မာအောင်မဖြစ်လာစေရန်ပြုလုပ်ပါ။
တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ သုတ်ရည်မထုတ်ပါနှင့်။ သငျသညျအသက်အရွယ်မှာတောင်မှသင်သုတ်ရည်မပါဘဲရက်အနည်းငယ်သွားသည့်အခါစွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုမြင့်တက်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသိရန်သန္ဓေသားလောင်းကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှစမ်းသပ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သင်ခဏတာသုတ်သင်ခြင်းကိုမခံရသည့်အခါမိန်းကလေးများသည်သင်ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်သယ်ဆောင်ထားသည့်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာစွဲချက်ကိုခံစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့အားဆွဲဆောင်သည်။ ယောက်ျားများသည်အမြဲတမ်းလိင်မှုဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်စိတ်သောကရောက်ပြီးအမျိုးသမီးများအားအဘယ်ကြောင့်ဆွဲဆောင်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသူတို့တွေးမိသည်။ သငျသညျသုတ်ရည်လွှတ်သောအခါ, သငျသညျအမြိုးသမီးမြားကိုဆွဲဆောင်သောအရာ ... အားကောင်းတဲ့ပုလ်စွမ်းအင်ကိုဖယ်ရှားပစ်နေပါတယ်။ ငါ့စကားမပြောနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတန်ငယ်မှိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသတိထားပါ။ အရမ်းမကြာခဏပြုမိကြောင်းဘာမှမှိုင်းဖြစ်လာသည်။ သငျသညျသဘာဝကျကျပြန်အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဖို့နဲ့တစ်ဦးညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်အလေ့အထအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေစတင်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျငယျရှယျပါသညျ။ သငျသညျပွုပါပွီစေခြင်းငှါမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုအလွယ်တကူဤအချက်မှာပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကျန်းမာအလေ့အထများတည်ထောင်ရန်စောလွန်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသင်မည်သို့အပျော်အပါးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယခုအကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသည်လျှင်သင်နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်နှင့်အခြားရငျးနှီးကိစ္စများနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
reddit.com အပေါ် thread: သငျသညျတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောမှဆက်စပ်ဘယ်လောက်သိသလော
မူးရူး PMO မှတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို Prostatitis အပ် - အခြားမည်သူမဆိုဒီရှိပါသလား
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်နာတာရှည်ဘက်တီးရီးယားမဟုတ်သောဆီးကြိတ်ရောဂါရှိကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုသည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြိမ်ရေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ငါ testicles / ပေါင်ခြံ / ခြေထောက်နာကျင်မှုများနှင့်နွေရာသီကျော်မတိုင်မီဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်ဆက်စပ်ရံဖန်ရံခါသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အဆင်မပြေခံစားခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။ တစ်ညမှာနာကျင်မှုကအရမ်းဆိုးလာတယ်။ ငါ ER ဆီကိုသွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒေါက်တာကဘာမှမမှားဘူး။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲနာကျင်မှုကတဖြည်းဖြည်းလျော့လာပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေ့သွားတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ခန့်တွင် MO မှ ၂ ပတ်ခန့်ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့ ၁-၂ ရက်ခန့်လောက်သာလုပ်သည်) ။ ငါတကယ်စိတ်ပူနေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားတယ်၊ အဓိကအချက်ကတော့ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကကျွန်တော့်ကိုတစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံး ၂-၃ သန္ဓေတားဆေးတွေထားဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာ nofap မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ ၉၀ ရက် PMO reboot မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကရောဂါလက္ခဏာတွေပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အဲဒါဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌တည်၏။ အခြားမည်သူမဆိုတွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိပါကညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်သင်ဘာလုပ်သနည်း။ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသနည်း (နာကျင်မှုလာသည့်အခါပိုမိုဆိုးဝါးလာအောင်ကူညီသည်၊ အဘယ်သို့နည်း) ။
အပ်ဒိတ်: ငါတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပေးတော်မူ၏နဲ့ကျွန်မ 8 ရက်ပေါင်းထဲက 10 ပြီးနောက်ကြောင့်ယူပြီးရပ်တန့်ပေးသောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ပဋိဇီဝဆေး levofloxacin သတ်မှတ်ထားသောခဲ့ဖော်ပြရန်မေ့လျော့ကြ၏။
၎င်းကိုရပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဆီးအိမ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံအပြည့်အဝမဖြုန်းနိုင်ဟုခံစားလာရပြီးတစ်ခါတစ်ရံထိုးခြင်းကဲ့သို့သောနာကျင်မှုများနှင့်ထူးဆန်းသောကြွက်သားညှစ်ခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ကျော / တင်ပါးဆုံတွင်းဒေသ (ဆီးအိမ်aroundရိယာတဝိုက်တွင်သာတွန့်လိမ်) ရှိသည်။ အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်၏ဆီးအိမ်များသည်အချည်းနှီးမဟုတ်သကဲ့သို့ခံစားနေရဆဲဖြစ်သော်လည်းတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဒဏ်ရာများလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
Levofloxacin ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာငါ PMO မပါရှိဘဲ ၂ ပတ်ကြာခဲ့ပြီ။ သုတ်ရည်ပြီးနောက်ငါလိင်တံထဲမှာအထူးသဖြင့်အစွန်အဖျားမှာခံစားရတယ်။ ငါကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ဆီးဆီးသွားလေ၏ဒါပေမယ့်သူကမပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါအိပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ငါနောက်တဖန် PMOed ကြောင့်ဖြစ်စေမကူညီခဲ့ပါဘူး နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒီကနေထွက်သွားပြီး MO မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်သူမှဒီအကြောင်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးလား။
ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအဆင့်မှ ၃ လနီးပါးကြာပြီဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသို့မဟုတ်ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်လလျှင် ၂ မှ ၃ ကြိမ်ခန့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်မှာလိင်ဆက်ဆံဖက်မရှိသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်သက်သာစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များသည်လည်းသူတို့၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းလူတိုင်းကထိုအရာကိုမရကြပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကန ဦး 90+ Day Reboot ကိုinပြီလကတည်းကလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံသွားခဲ့သည်။ ၁၅ မိနစ်တိုင်း MOE တစ်ခုပေါ်လာပြီ။ ငါ့အဘို့ကောင်းစွာထွက်အလုပ်လုပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါ porn ကိုကြည့်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့နေရာအားလုံးမှာကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီး၊ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေများလာပြီးစိတ်ပျက်အားလျော့လာတယ်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကဤအချက်ကိုကျွန်တော်သိလိုပါကကျွန်ုပ်သည်အချိန် ပြန်၍ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
ယခင်ကရက်ပေါင်း ၉၀ ရှိသောစိန်ခေါ်မှုကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ရည်းစားနှင့်ယခုပြန်လည်ပေါင်းသင်းပြီးနောက်ငါ porn နှင့် PMO ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် MO ကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ငါအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကစပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေပြီးဘယ်တော့မှပြန်လာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုဝမ်းသာပါတယ်
သို့သော်ဤအချိန်အတောအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်“ သေခြင်းချုပ်” မှုအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီးယခင်ကကဲ့သို့ခက်ခဲစွာမခံစားရပါ။ ဒါကြောင့်ငါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ညကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်နေရင်းနဲ့ NoFap သင်္ဘောကိုပြန်ခုန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စေ့စပ်ထားသူနဲ့ငါဟာအတိတ်ကလိင်မှုကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်အထိနယ်နိမိတ်ကိုထားချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလာမယ့် ၈၈ ရက်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ပြန်လည် reset” လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ညကငါလန်းဆန်းပြီးသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ (ဒီထဲမှာနေ့စဉ် kegels တွေပါဝင်တယ်) ငါ၏အမင်္ဂလာဆောင်နေ့အဘို့ပြင်ဆင်နေ
လွန်ခဲ့သော ၃ လတာတွင်မိနစ် ၂၀ ထက်မပိုသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအပေါ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင် (တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်) မျှတသောချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကျွန်တော့်စိတ်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးယေဘူယျအားဖြင့်သာယာချမ်းမြေ့စေတယ်။ သင်ပိုမိုမျှတမှုရှိလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏သဘာဝကျသည့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားများပေါ်ပေါက်လာသည်။ သင်ခံစားမိပါကခံစားမိပါလိမ့်မည် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု ထိုကဲ့သို့သောအာရုံနှင့် willpower အဖြစ်, ပြန်လည်အခြေခံသွားပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောရက်ပေါင်း ၈၀ မှ ၉၀ ရက်ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး M ကိုပုံမှန်ပြန်လုပ်ခဲ့သည်။ ငါသီတင်းနှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်စတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် M နှင့်အိုသို့တဖြည်းဖြည်း ၄ ကြိမ်တိုးသွားသည်အထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကမကြာသေးခင်ကမှကျွန်တော်ပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့သေနတ်သံရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မလိုအပ်သောအရာဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အနည်းဆုံးစိတ်ကူးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်လျှင်သင်လက်ခံနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်မင်းရဲ့လိင်ကိုကယ်တင်ပါလို့ငါပြောတယ် ငါထင်သည်မှာငါတို့အားလုံးလိင်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောယူဆချက်တစ်ခုမှာကြွက်သားနှင့်တူသည် - သင်လုပ်လေလေ၊ ၎င်းသည်အမှန်တရားနှင့်ဝေးကွာသည်။ နည်းနည်းပိုပါတယ်။ သင်မကြာခဏလှုံ့ဆော်မှုနည်းလေ၊ သင် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်လာလေဖြစ်သည် ငါသေချာသကဲ့သို့သင်တို့ reboot အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အထူးသဖြင့်သင်မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုသည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုထင်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းမှုကိုလုံးဝရှောင်ရှားသင့်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုသင့်တင့်မျှတစွာမသုံးစွဲနိုင်ပါ။ ရက်ပေါင်း (၉၀)၊ ရက်ပေါင်း (၁၇၀) နှင့်ရက်ပေါင်း (၂၀၀) တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို (၃) ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်သက်ရောက်ခြင်းဟုမယူမှတ်ပါ၊ တစ်ချိန်ချိန်, ငါ့လိင်စိတ်အလွန်မြင့်မားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုပမာဏသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည် (အမှန်တကယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆီးသွားရန်လိုသည်) ။ ဒါကြောင့်ဒီတင်းမာမှုကိုပျောက်အောင်ငါခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ငါအရမ်းလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမျှကြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ရုံအာရုံကိုသူ့ဟာသူအလုံအလောက်ထက်ပိုခဲ့ပါတယ်။
ငါ kinda ပုလုပျ-It-ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်ရပ်တန့်ပါတယ်။ ပိုကောင်းခံစားရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟာစိတ်ပျက်ပိုဆိုးစေသည်: ဆိုပါစို့။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ညမ်းမှုမရှိတော့သော်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်မူ၎င်းသည်မကြာသေးမီကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အတိုင်ပင်ခံ၏အားပေးမှုနှင့်ထံမှရေးဆွဲအကြံဥာဏ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့သည် အဘယ်သူမျှမပိုမစ္စတာ Nice Guy ဒီဖိုရမ်အပေါ်တစ်စုံတစ် ဦး ကအကြံပေးခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်တွင်လိင်အကြောင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းပြောသောအခန်းတစ်ခန်းရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်
(နေ့ ၇၈) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မမှားပါ။ ထိုအသေး, ယေဘုယျအားဖြင့်ငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖြစ်သင့်တူသောငါခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ (porn နှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲ) အဲဒါကိုလုပ်ခဲ့တုန်းကငါစွဲလမ်းခဲ့တယ် - အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်မဟုတ် ၄ ကြိမ်၊ နေ့တိုင်း။ ငါအိပ်မသွားမီနှင့်ငါ့နေ့စတင်ရန်နံနက်ယံ၌မနိုးမှီကလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သို့မဟုတ်အတန်းတက်ရန်နောက်ကျခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းချွတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည် porn နှင့်အတူဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲအသက်ရှင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါလေ့ကျင့်ထားတဲ့အလွန်တရာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာကျန်းမာနေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်
ဒါ့အပြင်ငါဒါကောင်းကောင်းလုပ်နေတာနှင့်မပါဘဲအရမ်းခံစားရတယ်ငါဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ငါချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီမကြာမီတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဝေးဒီ MO အကြောင်းကိုရှောင်ကြဉ်၏ငါ့နောက်ဆုံးအပိုင်းသို့စမ်းသပ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ချောဆင်ခြေလျှောဆင်းလျှောအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲရက်ပေါင်း 120 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေကောင်းပါတယ် ငါခံစားမိသောအခါငါအာရုံခံစားမှုနှင့်အနည်းငယ်မျှသာစိတ်ကူးယဉ်မှ masturbating ပါပြီ။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်သောအခါ၊ ၇၀ ခန့်ခန့်တွင်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအရူးလုပ်ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အခုတော့ငါကငါ့ရဲ့သဘာဝသံသရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာရှိရာပွိုင့်မှာပါ။ ငါ့ကိုရက်သတ္တပတ် (၁) ရက်သို့မဟုတ် (၁၀) ရက်ကျော်မျှမသွားဘဲမနေနိုင်သည်မှာလုံးဝမလွယ်ကူလှပါ။ ငါ့ရင်သွေးငယ်ကငါ့ကိုပါးရိုက်ပြီး“ ဟေ့၊ ငါ့ကိုသတိရလားမပြောခင်အထိငါတောင်စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့မှာဂရုစိုက်ဖို့စီးပွားရေးရှိတယ်!”
ငါ reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါ (MO) ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပတ်ပြီးနှစ်ပတ်တီးတယ်။ MO ကိုငါငြီးငွေ့လျှင်လုပ်စရာတစ်ခုခုအဖြစ်မရှုမြင်တော့ပါ ဒါဟာအမှန်တကယ်အရာမရှိခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ဂရုစိုက်တာပါ။ ထိုအခါငါမ MO ပါဝင်ပတ်သက်သည်ယခု MO ကိုသိပ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါ။ ငါတကယ်လိင်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲငါနေတဲ့ပြင်ဆင်မှုလိုတယ်။ ငါ၏အ PMO အရူး၏အလယ်၌ငါတကယ်ဤအချက်နားလည်မှုလွဲ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေပြီးအမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်မရှိသောကြောင့် PMO သည်၎င်းအားကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဆက်ဆံရေးသို့ပြန်နှင့်ကုန်းနှီးပြန် MO ကိုကတည်းကလည်းလျော့နည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုခုသုံးဖို့ခွင့်မပြုဘူး။ ငါစိတ်ကူးယဉ်ဖြတ်တောက်မှုကိုရှာဖွေလျှင်ငါရပ်တန့်။ ရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမရရှိနိုင်ပါက“ ဂိမ်းပြီးသွားပြီ” ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လိင်စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုငါသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်လိင်တံအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ငါ၏အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအစဉ်မပြတ်ငါအလင်းချုပ်ကိုင်မျှစိတ်ကူးယဉ်သုံးပါနဲ့ကျွန်မတဦးတည်းသီတင်းပတ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ထက် ပို. masturbate ဘယ်တော့မှကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ငါ့အဘို့အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
(ရက်ပေါင်း ၁၆၀ အပြာမရှိ။ ) ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ်မှ ၇ ကြိမ်အထိတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ရောက်ရှိနေသည်။ တခါတရံငါတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သာလုပ်ပါ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အသုံးပြုနေသည် (porn မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး) ။ ငါဟန်ချက်ညီညီခံစားမိရသည့်အကြောင်းရင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ယခင်ကကျင့်ခဲ့သောလမ်းစဉ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုကိုမခံစားရတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမချိုဘူးဆိုရင်တော့ငါမလုပ်ဘူး ထိုအခါငါကဲ့သို့သောချိုသောနံနက်, မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်ငါကဲ့သို့အရင်ညကဲ့သို့မဟုတ်။ ဒါကြောင့်ငါငြီးငွေ့စရာမလိုလျှင်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လောက်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်လောက် MO'ing သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုခဏတာဖြတ်ခြင်း IMO သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တိုးတက်မှုသိပ်မရှိပါဘူး အတက်အကျများကိုမျှော်လင့်ပါ။
[သုံးလ reboot ပြီးနောက်] ငါအမြဲငါသည်ဤကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်ခဲ့ယူဆသောကွောငျ့, တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး masturbating ခံရဖို့်၏စဉ်းစားစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ပါတ်တခါငါ့အဘို့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကြောင့်သူသိဘူး။ ငါအချို့သောယောက်ျား, ကိုယ့်ကိုကိုယ်လိုပဲသူတို့နှိုးဆော်ခြင်းရမယ့်လမ်းအဖြစ် porn ကို အသုံးပြု. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏လိင်စိတ်ဘယ်လောက်မြင့်မားတဲ့အထင်ကြီးစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ porn ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲ horny ဖြစ်ခြင်း၏မိစ္ဆာအဓိပ္ပာယ်ပေးသည်။
ငါထကြီးထွားလာတဲ့အခါ Playboy ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အဲဒါကနှစ်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်း“ ပုံမှန်” ပုံပေါက်စေခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemနာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့တယ်။ ဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့မြင်းကင်လုပ်ခိုင်းမှုကိုလျစ်လျူရှုရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ မကျန်းမာ” ပါ။ porn "ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ " သင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သင်“ ပိုက်များကိုရှင်းပစ်ရန်” မလိုအပ်ပါ။ သန္ဓေသားသည်သင်၏ဝှေးစေ့များထဲမှအလိုအလျောက်လှည့်ထွက်သွားပြီးပိုးမွှားကိုမလိုအပ်ဘဲလည်ပတ်စေသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသက် ၁၅ နှစ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသဘာဝဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိတစ်ကိုယ်ရေသမားသည်နေ့စဉ် (အင်တာနက်နှင့်အခြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း) ကိုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်“ သဘာဝ” မဟုတ်ပါ၊ ။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၄၀ လုံးလုံးဆေးကုသမှုခံယူနေသူတစ် ဦး ၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်သဘောထားသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကင်းမဲ့မှုအဆင့်သို့ချဉ်းကပ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ဒီဒဏ်byာရီကြောင့်လူမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးသည်ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်သည်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ရည်မှန်းချက်ကအရမ်းရည်မှန်းပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမှားယွင်းတဲ့ခြေနင်းကိုတင်ထားလို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကလုံးဝမှားယွင်းနေသည်ထင်ပါတယ်။ မင်းဘာကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာလဲ၊ မင်းရဲ့ဘဝမှာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ။
သေချာသည်သင်၏လိင်တံအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ရှိပါသည်။ သင်အချိန်နှိုးန်းကျင်အချို့ပုံစံတစ်ခုစိုက်ထူရလိမ့်မည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဆီးရောဂါပါရဂူသည့်ပိုက်မှထွက် clean ရန်မလိုပါကြောင်းခံစားရသည်။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုခန္ဓာကိုယ် Pre-cum ၏ကွဲပြားပမာဏထုတ်လုပ်အားဖြင့် adapts သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဖြစ်ဝေးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးမှ masturbating တစ်မှတ်တိုင်ကွာဟချက်ပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံမှာ, ကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိခိုက်စေပုံရတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထိန်းညှိဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအသုံးမပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်၎င်း၏လိုအပ်ချက်, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရ။
[ပြန်လည် reboot လုပ်ပြီးနောက်] ငါသည် MO ကိုရက်အနည်းငယ်တိုင်းစတင်ခဲ့သည်။ အားလုံးသည်အလွန်သဘာဝကျပြီးကျန်းမာသည်။ ထိုအခါငါကအကယ်စင်စစ်အဲဒါကို၏ငရဲအဘို့သို့မဟုတ်ငါပျင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဘူး။ အဲ့တာကကျွန်တော့်ကိုတကယ်ထိမိတဲ့အခါ၊ ငါ့ဘဝရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဘယ်တော့မှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပြန်ဖွင့်ရန်သာမကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးနက်သောမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမရန်ဤဒေသတွင်သင်ကြားရန်လည်းလိုအပ်သည်။
Aprilပြီလကစပြီး PMO မပါပဲ ၉၁ ရက်နဲ့ ၅၁ ရက်သွားခဲ့တယ်။ စိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကန ဦး reboot ကကျွန်တော့်အတွက်တကယ်အံ့သြစရာကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါနောက်ဆုံးကနေငါအများကြီးပိုထွက်ရှိသည်ထင်ကြဘူး။ ၁၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်းတစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစားနိုင်သည့်ပုံစံကိုယခုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ ငါဆာလောင်နေတယ်၊ ​​ပိုမိုထိရောက်တဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံမိပြီးတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုပိုပြီးမောင်းနှင်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် ပို၍ စိတ်အားထက်သန်သည်။ ငြီးငွေ့မည်မဟုတ်။ အိမ်မှထွက်ပြီးဘာမှမလုပ်လို၊ နိုးထလာသည်နှင့်နိုးလာပြီးအမျိုးသမီးများမှထပ်မံကြည့်ရှုလိုသည်။
သူတို့တစ်တွေလတခါအကြောင်းကိုပျမ်းမျှလွှတ်ပေးရန်တူသောတရုတ် Taoists သုတေသနပြုလုပ်အသံ။ ပေမယ့်သူတို့ကဆောင်းရာသီတွင်ပိုမိုပြန်ကိုင်လို။ ကျနော်တို့အားလုံး PMO အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်သဘောတူနိုင်ပါတယ်ထင်နေစဉ်, နေ့တိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်အမြဲလုံးဝအဘယ်သူမျှမ MO ကိုသွားမယ့်အဖြစ်ဆိုးသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်မဟုတ်။ မည်သည့်ညစ်ညမ်းမပါဝင်ပါဘူးတဲ့ပျော်ရွှင်အလတ်စားရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ငါ YouTube ပေါ်မှာလိင်မှုနှိုးဆွပေးတဲ့ဗီဒီယိုကိုမတော်တဆထိမိလဲပြီးအဲဒါကိုမပိတ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝဖွင့်ထားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါကအချိန်တစ်ချိန်လုံးထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ငါဖွင့်ခံရခြင်း၏ခံစားချက်ကိုလုံးဝနှစ်သက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငါမလိုချင်သောကြောင့် M ကိုမရွေးချယ်ခဲ့ပါ၊ P လိုချင်သောဆန္ဒလည်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါခံစားနေရတဲ့အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးကဒီအပြောင်းအလဲဆီကိုငါရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီဗီဒီယိုတွေဟာလုံးဝညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမဟုတ်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းကဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရတာမှတ်မိပြီးဒီဗီဒီယိုတွေကလုံလုံလောက်လောက်မလှုံ့ဆော်ပေးဘူး၊ ဤသည်တစ်ခုခုသွားကြောင်းနောက်ထပ်အရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာစိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့် M နှင့် O ကိုလွန်ခဲ့သည့်တစ်နေ့သို့မဟုတ်တစ်ရက်ခန့်ကသတိပြုမိခဲ့ခြင်းကြောင့် P သည်ယခုကျွန်ုပ်ဘဝတွင်မရှိသေးသော်လည်း M နှင့် O ကိုလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေသည်ဟုကျွန်ုပ်အားဖော်ပြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများမှ။ ယခုငါသတိထားမိလာသည်နှင့်အမျှဘာလုပ်ရမည်ကိုသိသည်။ အရင်းအမြစ်ပြissueနာ (စိတ်ဖိစီးမှု) ကိုကိုင်တွယ်ပါ။ အောင်ပွဲခံလုနီးပြီ။
ငါ PMO မရှိ (အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူတစ် ဦး O) ရက်ပေါင်း 80 ငါသွား။ တဖန်ငါ MO'ing စတင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပြbutနာမဟုတ်ပေမယ့်တင်းမာမှုကိုငါမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် (၃) ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အပတ်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးကျွန်မရဲ့ libido ခံစားခဲ့ရတယ်။ အမျိုးသမီးများမှ O မှလွဲ၍ PMO သို့ပြန်သွားပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကြာပါသည်။
ငါတ ဦး တည်း wank တစ်ပါတ်ယခု4ပတ်ကြာလုပ်နေတာ။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်“ ၃ ပတ်တွင်ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်နောက်တစ်ပတ်အတွက် ၅ ကြိမ်နှင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” အစီအစဉ်ထက်ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့ငါခံစားရသည်။ MO အရက်အလွန်အကျွံသောက်နေသူများကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အကြံပေးလိုပါတယ်။ “ ငါဘယ်တော့မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး” ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကအရမ်းကိုရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းပြီးကျွန်မကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။ သို့သော်ထို့နောက် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အစောပိုင်းကတည်းကပိုမိုအားကောင်းလာပြီးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါသော်လည်းလုပ်ချင်သည်မှာအပတ်စဉ်အော်ဂဇင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်ကိုနှေးကွေးစွာဖြင့်စုဆောင်းနေသည်ဟုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သော abstinence ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတည်ဆောက်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ အပတ်စဉ်အော်ဂဇင်များသည် ၇၅၊ ၁၅၀၊ ၂၂၂၊ ၃၀၀၊ ၃၇၅၊ ၄၅၀ တို့ကိုပြသနိုင်ပြီးဇယားတွင်“ အထီးစွမ်းအင်” ကို ၁၀၀၊ ၂၀၀၊ ၃၀၀၊ ပြိုကျသွားသည်။
ငါကအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ lite ဆွနှင့်အတူစိုက်ထူတယ်အလွန်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောနှေးနှေးလေဖြတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့သေခြင်းတရားအဟောင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုခံစားရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမျက်စိဖြင့်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူသံကိုသုံးပြီးဘာကိုမှစိတ်ကူးမရခဲ့ပါ။ ငါအာရုံစိုက်နေစေရန်ငါ့အလင်းကိုငေးကြည့်။ ငါ porn စတင်ကတည်းကငါအမြဲတမ်း clencher ဖြစ်ရပြီဒါကြောင့်ငါလုံးဝ clench ခဲ့ပါဘူး။ ငါကငါ့အမှားတွေမပျောက်စေဘဲအမြန်လာဖို့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း porn ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရလာတာနဲ့အမျှ .... ငါကစပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပြီးငါခွင့်ပြုခဲ့တယ်၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကငါအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အော်ဂဇင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါ့အစဉ်အဆက်ပထမ ဦး ဆုံးထက်သာ။ ကောင်း၏။ ကျွန်တော်ဘိန်းဖြူတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဒီဟာနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ အံ့သြစရာ ဒါဟာအရမ်းစိတ်ထိခိုက်မိလို့… ၇၀ ရက်လောက်ကြာတဲ့ cum ကိုကြည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ porn နဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်။ ရုတ်တရက်အားလုံးစိတ်ထဲရှင်းသွားတယ်၊ မြူခိုးတွေမရှိတော့ဘူး၊ စိုးရိမ်စိတ်မရှိတော့ဘူး၊ ကျွန်မရဲ့ပထမအပတ်ကရှောင်ကြဉ်ပြီးကတည်းကခံစားခဲ့ရသမျှအကောင်းဆုံး။ အဘယ်သူမျှမ chaser မရှိပါ, porn ကိုကြည့်ရှုရန်၏အမြင်ကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်နှင့်ငါဘယ်သူ၏ရှင်းလင်းသောခံစားချက်နှင့်အတူထွက်ခွာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးနှင့်ဖူးတွေ့ဖူးသမျှကမ်းခြေပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်ရန်သွားပြီးကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသူအားလုံးကိုစကားပြောခဲ့သည်။ ငါဟာမိန်းမတွေကိုချစ်ခင်တွယ်တာမှုနဲ့ငြီးငွေ့မှုတွေမရှိတော့ဘဲကမ်းခြေရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဟောင်းတွေတောင်မှ ငါသူတို့ကိုနမ်းပြီးခံစားချင်တယ်။ သူတို့ကိုမနမ်းဘူး။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းကကျွန်တော်အတော်အတန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ၈ လလောက်ကြာအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ၎င်းသည်အခြားသူများအတွက်အလားတူရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မိန်းမများကိုဆွဲဆောင်ရန်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာမဟုတ်ပါ။ လူတစ်ယောက်သည်အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်လက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုအမျိုးသမီးများအာရုံစိုက်လာခြင်းမရှိဟုသူ၏ ဦး နှောက်ကိုသင်ကြားပေးနေသည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်သူ၏အကျင့်ဆိုးများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပြောင်းလဲသွားပြီးကောင်းသောအကျင့်များကိုကျင့်သုံးနေပြီးလူမှုရေးတွင်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာသည်။ ။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၉ လကဤပုံနှင့်မတူသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ရက်တွင်တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်ယခုထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်) ။
အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောတစ်ကိုယ်ရေလူအများစု (ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်အော်ဂဇင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း) သည်လုံး ၀ Abstinence လမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲသွားပုံရသည်။ လူအများက“ PMO No” ဟုခေါ်ကြသည်။ ငါကိုယ်တိုင်အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စသာမကကျွန်ုပ်၏ရင်းနှီးသောရှုထောင့်မှလည်းအဆက်ဖြတ်နေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရှုံးပေးလိုက်ပြီး orgasming ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ နေ့တိုင်းလိုလိုကမှတ်မိသလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူး။ ပြီးတော့ငါတစ်ကိုယ်တော် tantra ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ karezza ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ညီမျှခြင်း။ ပြီးတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ အယူအဆတစ်ခုလုံးမှာထိန်းချုပ်မှုကိုတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ “ လိင်အင်္ဂါအနှိပ်” ဟုခေါ်လိုသည်။ ဒါကြောင့်ငါ့နည်းစနစ်တစ်ခုလုံးသည်မိတ်ဖက်ကာရီဇာကဲ့သို့အလွန်နှေးကွေးနူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ လုံးဝနှင့်လုံးဝသက်တောင့်သက်သာရှိသောလိင်အင်္ဂါအနှိပ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက် 60-70% arousal ဇုန်၌နေရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုကျော်လွန်သွားပါကသင်သည်“ ပြန်မရသောအရာ” သို့ရောက်ရှိသွားပြီးအော်ဂဇင်ကိုရွေးချယ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ဤတစ်ကိုယ်တော်နည်းလမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ချစ်ခင်။ တွေးတောဆင်ခြင်သောမိမိကိုယ်ကိုနှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုနိုးထရန်နှင့်ထိုပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းကိုဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအနေအထားသို့ရောက်အောင်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏သက်ရှိကိုအာရုံစိုက်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းကိုတီထွင်ဆန်းသစ်သောစွမ်းအင်ဖြင့်ဖြာထွက်စေသည်။ သင်သည်ဤခံစားချက်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်သောအခါသင်၏လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုးဆွတော့မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ပျော်ရွှင်မှုမှာဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအမြင့်နှင့်တူပြီးသင်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကထိုခံစားမှုသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။
ငါ porn ကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေကြသည်မဟုတ် - သို့သော်အင်တာနက်နှင့်အတူ, တခါတရံရှောင်ရှားရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ဝှေ့သမားများ၊ လက်ဝှေ့သမားအကျဉ်းချုပ်များသို့ ၀ တ်ဆင်ခြင်းသို့ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝတ်ဆင်သည့်အရာများသို့ဂါလံတစ်ဂါလံထည့်သွင်းရန်မလိုတော့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကအခြားယောက်ျားတွေသူတို့ကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်လူရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ function ကိုမရနိုငျကွောငျးကိုရှင်းပြတဲ့အခါငါကထူးဆန်းရှာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရေးမဝသောအခါ - လက်ရှိကျွန်ုပ်မဟုတ်သော၊ ၄ နှစ်ကျော်မျှမအောင်မြင်သေးသော၊ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မောကျနေစဉ် ၀ န်ထုပ်ကိုကျပန်းကြားဖြတ်ခြင်းဖြင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ဒါကိုလူအများစုကအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ခိုင်လုံတဲ့စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့ဘူး။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်များသည်အမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ချထားလိုက်သကဲ့သို့ခံစားကြရသည် - ၎င်းသည်အချိန်တိုင်းတွင်လူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအခြေအနေများမှာကျပန်းဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်တစ်လလျှင် ၄-၄ ရရှိသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံနည်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဆုလာဘ်စနစ် ဖြစ်၍ ငါဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အိပ်ရာဝင်၊ နံနက်ယံ၌ထလိုက်သည်။ မကြာခဏကျွန်ုပ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘောင်းဘီတိုများကိုဖြတ်တောက်စဉ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ၊ အစောပိုင်းကနည်းနည်းစော။ ကျွန်ုပ်သည်ထကာပေါက်ကွဲစေတတ်သောအော်ဂဇင်ရှိနေစဉ်မိနစ်အနည်းငယ်မျှအိပ်နေရာတွင်အိပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ထဲအနည်းငယ်မျှသာပါ ၀ င်သောရေချိုးကန်ထဲ၌မြန်မြန်ဆန်ဆန်လူရှုပ်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ရှိသည့်အော်ဂဇင်ကိုကျွန်တော်မစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါ။
မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိပ်မက် likes သူကိုနောက်ထပ်ကောင်လေး:
ဒီတော့ရက် ၉၀ အတွင်းဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ ယုံကြည်မှုတိုးလာ အလုပ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ဂိမ်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း - မြှင့်တင်ရေးတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ ကြည်လင်သော ဦး ခေါင်းရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုများလာခြင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဟူသောအတွေးများကြောင့်သတိမထားမိ) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းကိုမခံစားရတော့ဘဲမျက်လုံးချင်းဆုံရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည် အမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း။ ရှိသည်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူကျပန်း interaction ကပျော်မွေ့။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းသည်နေထိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလုံးလုံးလွင့်စင်သွားစေသည့်ကြည်လင်သော၊
နောက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု (မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဟန်ချက်ညီနေမှသာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့) ။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ထား Self- နှိုးဆွလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပြီ။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်။ ၎င်းသည်သမားရိုးကျလိင်၌ဖြစ်စေ၊ karezza။ ၎င်းသည်ဆီးကြိတ်ofရိယာမှအရည်အနည်းငယ်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်ညင်ညင်သာသာခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်“ စနစ်” အပေါ်ဖိအားလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ဤဖိအားကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ အပြာရောင်ဘောလုံးများ” ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝကျန်းမာခြင်းနှင့်လန်းဆန်းစေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်၎င်းသည်မျိုးသုဉ်းရန်နှင့်မျိုးစိတ်ဆက်လက်တည်ရှိရန်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတွန်းအားကိုမခံဘဲမနေပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လှုံ့ဆော်မှုအဆင့် (၉) သည်အော်ဂဇင်ကိုဆိုလိုသည်) သို့ရောက်သော်လည်း ၅-၇ မှ ၇ သို့ထက်မကသောထိန်းချုပ်ထားသည့်ခံစားမှုထက်ပိုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစပျိုးအဆင့်များကိုလေ့လာရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း၊ အလွန်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ porn ပါဝင်ပတ်သက်ရှိပါတယ်။
သငျသညျအော်ဂဇင်မပါဘဲဂျက်ရိုက်ရန်ကြိုးစားပါက glans ၏နောက်ဘက်အခြမ်း (frenulum ရှိသည့်အခြမ်း) ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် glans ၏ရှေ့ဘက်တွင်အာရုံစိုက်ရန် (အကြံပြုသည်သင့်ဝမ်းဗိုက်ကိုထိသောရှေ့ဖက်ခြမ်းသည်) သင်ကဆီသို့လိင်တံကိုယူလျှင် button ကို) ။ အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ, ဒါကြောင့်ငါမြင်သောအရာကိုအာရုံစိုက်ခံရမယ့်အစား, အာရုံနှင့်ပျော်မွေ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်အချိန်တစ်ခုလုံးကို။ ငါသည်လည်းအရာဝတ္ထုအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးစိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ ငါ Mantak Chia ၏စာအုပ်တစ်အုပ်မှငါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို caressing ကဲ့သို့ကောင်းသောခံစားမှုနှင့်အချို့သော oxytocin သွားနိုင်ရန်ကူညီပေးသောအကြံပေးချက်အချို့ကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည်“ လုံးဝလိင်တူချစ်သူ” ဖြစ်သည်ဟုထင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်းကိုမဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်ဆီးကျိတ်၏နေရာနှင့်လိင်တံတစ်ခုလုံးကိုလည်းထိခြင်း၊ က။ ထိပ်ဖျား: lube (KY ဂျယ်လီ) သည်ဤရှေ့ဆွသောလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမသုံးသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဤအတွေ့အကြုံကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် -
ငါခဏတာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းပြmastနာရှိခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်တချိန်လုံးလုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပြီးရပ်တန့်ဖို့အရမ်းခက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတတိယအကြိမ်ဆေးကြောခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ (တစ်ခုစီသည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ ) ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမည်သည့်ပုံစံနှင့်မှမရုန်းကန်ခဲ့ဖူးဘူး Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ပြီးတော့သောနောက်ကျန်းမာ masturbate နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏ဦးနှောက်သည်အထိခဏရှောင်ကြဉ်ရန်ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ငါငါ့အဘို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းကောင်းတစ်ဦးအနည်းဆုံးအကွာကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအဖွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားနေစတင်သောအခါမူကားငါပြန် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ဆွဲခံရဖို့မရှိစေရေးအတွက်မဟုတ်တော့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သုက်မကောင်းသောအမရှိကြပေ။ တစ်ခါတစ်ရံခန္ဓာကိုယ်ကရင်ဖွရန်လိုအပ်သည်နှင့်အသုတ်ရည်လွှတ်ကြောင်းလုပ်ဖို့ခိုင်လုံသောနှင့်သဘာလမ်းကြောင်းပိုလျှံစွမ်းအင်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကသုတ်ရည်လွှတ်ဘောငျထဲက 100% သောတင်းကျပ်နှင့်တစ်ယူသန်ဆန်ရပ်တည်ချက်ယူမလိုအပ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ကယ့်ကိုပြီးတော့သင်ရုံမအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်များနှင့်ခံစားခွင့်ပြုသင့်တယ် ejaculate ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစီမံခန့်ခွဲမှာဒါကောင်းသောကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်သင့်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေး fixed သည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြ။
လိင်ပြီးတော့ Aka forage များထဲတွင်ကလေးများနှင့်ဗဟိုအာဖရိက၏ Ngandu လယ်သမားများသည်ကိုရှာဖွေခြင်း